Ilmadii aad in badan oo hore iga daadisay miyay kugu filaan weyday? Nov 16, 2012 (QOL) Erayga Cinwanka u ah qoraalkan oo micne weyn samaynaya wuxuu ka turjumaya dareenka dhabta ah ee shacabka Soomaalida Ogaadeenya gaar ahaan shacabka Magalada Jigjiga ku dhaqan, waxaa eraygan ku cataabaysa hooyo ka mid hooyooninka Soomaalida Ogaadeenya ee dhibaatooyinka faraha badan gumaysiga kala kulmay oo dareenkeeda la wadaagtay Hawlaweenada Qorahay Media ee Ogaadeenya ku sugan.
Hooyadani waxay soo qaadanaysaa dhacdooyin faro badan oo aad u xanuun badan kuwaas oo ay goob joog ahayd dhamaantoodna shaqsiyadeeda si toos ah & si dadban labadaba u saameeyay, hooyadani waxay sheegtay in ay gumaysiga kala kulantay dhibaatooyin kala duwan waxayna xustay in loogaystay jidh dil & falal guracan oo ay kula keceen ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya.
Hadaba aan idiin kala baxno hooyada dareenkeeda inala wadaagaysa kana waramaysa dhacdooyinka ay la soo kulantay.
Waxaa in badan i danqanaya nabarada dhaawacoodu uusan iga bogsanin ee cadowgu ii gaystay nabaradaasna waxaa ugu xanuun badan kuwa qalbigaga iga gaadhay waayo waxaan marwalba soo xusuustaa dhacdooyin & falal argagaxleh aad u foolxumaa oo aan goob joog u ahaa kuwaas oo aanan xusuustooda kagudbi karin inta aan noolahay.
Waxaa hortayda lagu dilay dad badan oo ehelkayga ah waxaana xabsiyada maanta lagu jidh dilayaa qaar kale oo iyaguna ehelkayga ah kuwaas oo aan wax dambi ah cidna ka galin, waxaa si xushmad daro ah loola dhaqmaa wax garadkii umadan wanaaga ku hogaaminayay, culimadii ayaa xaqii laga garba duubay oo aan hadli karin xiligana loo maleegayaa shirqool ladoonayo in ay diinta kaga been sheegaan.
Dhalinyaradii waxaa laga dhigay cadaysimo oo waxaa laga muldhinayaa xishoodkii & dhaqankii gobanimada ku salaysnaa waxaana ladooanyaa in ay ku milmaan umad aanaan wadaagin dhaqan, diin, deegaan & af midna, gumaysiga Itoobiya wuxuu iga oohiyay xiliyo faro badan oo noloshayda ka mid ah waxaan dhaaxa laaldi waayay murugada & uurku taalada uu u baday waxaa ii sii muuqda dad badan oo ehelkayga ka mid ahaa oo habeen badoow sidii loola baxay aan raq & ruux toona dib loo arag.
Waxaa godadka madow ee dadka lagu ciqaabo habeen walba ka qaylinaya dad badan oo aan aad u jeclahay kuwaas oo ka mid ah kumanaanka shacabka ah ee xaqdarada lagu xidhxidhay Jeelashana sida bahalnimada ah loogu jidh dilayo, habeenkii hurdo ma seexdo waxaanan dhagaystaa muusanawga dadka masaakiinta ah ee Jeelasha Jigjiga lagu ciqaabayo waxaanan saqda dhexe la fdhiistaa hoohin & baryo aan Allah dadkaas gargaar ugu weydiiyo, indhahayga ilmadu kama qalasho oo waaba ii oohin joogto ah.
Iyadoo sidaan sheegay ay dani iga oohisay ayay Itoobiya oohintaydii u baahatay waxaana la igu jujuubay markii ugu horeysay in aan indhihii qalali waayay ilmo qasab ah ka keeno, geeridii Meles Zenawi ayay ahayd markii dhamaan shacuubta kala duwan ee la gumaysto sidaqasabka ah lagaga oohiyay dad badana lagu qasbay in ay u baroortaan cadowgoodii.
Waxay ahayd maalmihii iigu adkaa noloshayda waayo waxaan u ooyay nin aan geeridiisa aad ugu farxay ayna ila gudboonayd in aan salaatu shukri tukado, arinta yaabka igu noqotayna waxay ahayd ruuxaygii marwalba qalbiga & indhahaba ka ooyi jirtay maalmihii geerida malas dhibiq ilomo ah ayaan iska waayay waanan ku dhici waayay in aan sida Amxaarda indhaha Basbaas marsado markaas ayaan intaan kaligay isla shawray waxaan naftayda weydiiyay meesha ay ilmadii iska daadan jirtay u kacday, naftayda oo ka jawaabaysa su'aasha aan weydiiyay ayaa iyadoo gumaysiga kalifaya u jawaabaysa waxay la soo booday kalmadan "Ilmadii aad in badan oo hore iga daadisay miyay kugu filaan weyday?"
Siday doontaba ha ahaatee maalmihii geeridii Meles waxaan marnay hawl cidhiidhi badan lahayd oo gabagabo na galisay taas oo aanan shaqsi ahaan filaynin waligay isma odhanin oohintii ay Itoobiya qarinaysay ayay kaaga baahan doontaa oo lagaa mudan doonaaa waanse arkay oo waxaan ooyay oohin qasab ah.